I-AddThis Yongeza ukuJoliswa kwaBantu ukuphucula ukuThethathethana, ukuGuqulwa kunye neNgeniso | Martech Zone
Uninzi lwethekhnoloji yentengiso yehlabathi ijolise ekutyeleleni. Ikhonkco lokuloba licimile kwiitshathi kwaye kukhokelela kwiziphumo ezimbi kubathengisi. Ukufumana umntu kwindawo yakho kulula kakhulu, kodwa ukubagcina apho kwaye ubakhuthaze ukuba benze ishishini nawe kunzima kakhulu. Nokuba kupapasho olufana nolwethu, ukwandisa ukubonwa kwethu kubalulekile- kodwa ngaphandle kokuba abantu bayasebenzisana neempawu esithetha ngazo, konke oko akunto.
Kuya kufuneka sifikelele kubaphulaphuli abaya kuba nomdla kumxholo wethu-kwaye nje ukuba ekugqibeleni sifike kwindawo yethu, kuya kufuneka sisebenze nzima ukuyigcina kwindawo leyo okanye ukubonelela ngeendlela zokuzibandakanya ngakumbi. Ngokwethu senza oko ngemirhumo yokubhaliselwa kunye neengcebiso ezinxulumene neposi kwinqanaba elibanzi.
ZAMABANDLA ATHUNYIWEYO isebenzisa amandla ezigidigidi zabasebenzisi ekufikelelwe kuzo ukubonelela ngesiqulatho esijolise kubo ukugcina iindwendwe zakho zibandakanyeka kwindawo yakho. Yenzelwe ukunceda abanini bewebhusayithi ukuba bandise ixesha elichithwa ngumsebenzisi kwindawo yabo ngokubonisa umxholo kunye nezibonelelo ezenzelwe umntu ukuba abe ngumdla kuzo.
Xa iwebhusayithi yakho inendwendwe lokuqala, awazi ukuba undwendwe luthanda ntoni okanye liza kucofa phi. Kodwa i-AddThis sele iyazi imidla yomsebenzisi kunye nokukhethwa ngokusekwe kuthethathethwano lwabo lwangaphambili kwezinye iisayithi zeAddT Ngoku indawo yakho inokujolisa kumxholo, iimveliso okanye iminikelo esekwe kwimbali yangaphambili yomsebenzisi.
Ungaseta ukujolisa ngokulula ngaphakathi kweAdThis:
Kwaye unokulinganisa ukuguqulwa ngokulula kwiDashboard yedash:
Lo msebenzi wawukade ufumaneka kuphela kubathengisi nakubapapashi abaphezulu. ZAMABANDLA ATHUNYIWEYO uyayongeza nge- $ 12 / ngenyanga njengenxalenye yobhaliso lwe-AddThis Pro, eyenza ukuba ifikeleleke kakhulu.
tags: yongeza okuYongeza ezi ngcebiso zomxholoiingcebiso zomxholoUkujolisa kumxholophucula izinga lokuguqulwaphucula ukuzibandakanyaphucula ingenisoyandisa utshintshoukwandisa ukubandakanyekayonyusa ingenisogcina iindwendweumxholo wakhogcina iindwendwe